Posted by ဂျေဂျူဝိုင် on Monday, May 4, 2009	Under: နည်းပညာ
အဲဒီ @ ရဲ့ သမိုင်းအစက ဒီလိုပါ။ ရှေးရှေးတုန်းက အင်္ဂလိပ်စာကို အသုံးပြုတဲ့ စာသမားနဲ့ ဘာသာရေးစာပေ ရေးသားကြတဲ့ ဘာသာရေးဆရာတွေက စာရေးရာမှာ at ကို မြန်အောင် @ လို့ရေးပါတယ်။ at ကိုဆိုရင် သုံးချက် ရေးရပါတယ်။ @ ဆိုရင် တစ်ချက်တည်းလေ။ အဲဒါနဲ့ @ ဆိုတဲ့ စာလုံးဖြစ်လာတာတဲ့။
ဟင် ဘာလဲဆိုင်ဘူး။ အဒီ @ ကို တရုတ်က ကြွက်ကလေး တဲ့။ ဘယ်ဂျီယံက ဘာမှ မရှိခြင်း တဲ့။ လန်ဒန်က မျောက်အမြီး တဲ့။ ဒိန်းမတ်က ဆင်နှာမောင်းတဲ့။ ဖင်လန်က ကြောင်မြီးတဲ့။ ဂျာမဏီက တွဲလွဲခိုတဲ့မျောက် တဲ့။ ပြင်သစ်က ပက်ကျိ တဲ့။ ဟန်ဂေရီက တီကောင် တဲ့။ ကိုးရီးယားက ခရု တဲ့။ နော်ဝေးက ၀က်မြီးတဲ့။ အီတလီက ပက်ကျိတဲ့။ ရုရှားက ခွေးသေးသေးလေး တဲ့။ မြန်မာကကော ? ။
In :	နည်းပညာ
Next post: Web နှင့်...
Previous post: မုန်တိုင်းနှင့်အေ...